Yakachipa isingachinjiki Yakakura Angle Vertical Sidewall Rubber Fertilizer Belt Conveyor Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Yakakura Angle Vertical Sidewall Bhandi Conveyor inonziwo dip dip hombe bhandi rekutakura) iine hukuru hwekufambisa. Saka kuti chishandiso chakanakira kuwana yakakura kona kuendesa. Inogamuchirwa zvakanyanya muzvirongwa zvepachivande.
Chii chakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor yakashandiswa?
Izvi Huru Angle Kurerekera Belt Conveyor yakanyatsokodzera bhodhi renji yezvigadzirwa zvemahara-zvekudya, zvekurima, zvemishonga, zvekuzora, indasitiri yemakemikari, senge chikafu chinodyiwa, chikafu chakaomeswa, miriwo, michero, confectionary, makemikari uye zvimwe granules.
In fotereza yekugadzira mutsara, iyo Huru Angle Kurerekera Belt Conveyor inogona kushandiswa semidziyo yekufambisa kubatanidza maitiro akasiyana, inowanzo sarudzwa pasi pekukanganiswa kwenzvimbo mune yekugadzira saiti, iyi mhando yekutakura ine compact dhizaini yekuwedzera kukwirira uye simba rekufambisa.
Yakasarudzika Sevhisi yeakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor
1) Ipai OEM sevhisi
2) Makore makumi maviri echiitiko
3) Tinogona kugadzira uye kugadzira iyo yekutakura zvichibva pane chako chaicho chinodiwa.
4) Kutengeswa kwemutengo wakaderera pazvipenga.
Zvimiro zveakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor
1. Mari yekugadzirisa yakaderera.
2. Huru yekufambisa chinzvimbo, uye inogona kudzivirira zvinhu kupaza zvakanaka.
3. Bhandi rinogona kuita kuti shanduko ibve pane yakatwasuka kusvika pakujekesa uye kubva pakuda kuendesa kune yakatwasuka.
4. Inochengetedza nzvimbo yakawanda sezvo ichibvumira zvinhu kuendesa pane 0-90 degree.
Yakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor Vhidhiyo Ratidziro
Yakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor Model Sarudzo
Iyo Yakakura Angle Vertical Sidewall Bhandi Conveyor inogona kuve yakakamurwa kuita T, C uye TC zvinoenderana nezvikamu zvavo zvakasiyana.
•Type T inokodzera mafungiro β≤40 °;
•Mhando C inokodzera kumakesi ane hunyanzvi hwezvinhu fluidity pakuda kwe β> 40 °;
•TC mhando inokodzera mafungiro β> 40 °, iine viscosity yakakura yezvinhu.
Pashure: Inotakurika Nhare Bhendi Conveyor
Zvadaro: Bhaketi erevheta